အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးနှင့်လက်လီရောင်းချသူများ»စာမျက်နှာ ၂၈ မှစာမျက်နှာ ၂၂ Martech Zone
စာဖတ်ချိန် -2မိနစ် No doubt that ecommerce is havingahuge impact on retail… but no matter how big your monitor is, it won’t substitute walking intoaretail outlet and touching the product. Nor will free shipping always beasubstitute for walking out of the store with the item you want right now. Just yesterday I boughtajuicer from Bed Bath and Beyond. I readaton online about them and was even offered a
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 3, 2011 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2014 Douglas Karr
စာဖတ်ချိန် - <1 မိနစ် Podcasts တွေကိုစုစည်းပေးတဲ့ Stitcher ကို Marty Thompson ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းမှာအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တယ်။ သင် iPhone, Android, Blackberry, ဒါမှမဟုတ် Palm ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Stitcher ကို download လုပ်ပြီး Web Podcast ရဲ့ Edge နဲ့ Marketing Podcast ကိုနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ Lisa Sabin-Wilson, Eric Tobias, Chris Brogan, Debbie Weil, Jason Falls, Scott တို့ပါဝင်သည့် guests ည့်သည်တော်များကိုနှစ်သက်စွာပြသသည်။
စာဖတ်ချိန် -2မိနစ် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က SEO နှင့် Internet Marketing ကုမ္ပဏီ Search Engine People မှ Jeff Quipp နှင့် တွေ့ဆုံ၍ စကားပြောခွင့်ရခဲ့သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများနှင့် ပတ်သက်၍ Tor ကတိုရွန်တိုရှိ Search Marketing Expo နှင့် eMetrics Conference တွင် Answers.com မှကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ VP Gil နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Jeff သည်သော့ချက်တစ်ချောင်း - brought ည့်သည်၏ရည်ရွယ်ချက် - ငါတို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်အမြဲကြိုးစားနေသည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်
စာဖတ်ချိန် - <1 မိနစ် Every once inawhile while you’re browsing YouTube, you findagem. This video from Listrak was published in February when they launched their shopping cart abandonment solution, but I wanted to publish it here foracouple reasons. First, it’sanice overview of what shopping cart abandonment is… next, it’sabeautiful video and I hope Listrak is producing more of them. Here’s some highlights from the Listrak product information page: According
လူမှုမီဒီယာ ၅ နှစ်အတွင်း ၁၈% + တိုးရန်သုံးခြင်း
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 19, 2014 Douglas Karr
စာဖတ်ချိန် - <1 မိနစ် CMO စစ်တမ်းသည်ထိပ်တန်းစျေးကွက်သမားများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုစုဆောင်းဖြန့်ဖြူးသည်။ စျေးကွက်၏အနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထူးချွန်မှုကိုခြေရာခံရန်နှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏တန်ဖိုးကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ Marketing Pilgrim မှထောက်ပြသောအဓိကကျသည့်အချက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးစရိတ်များအတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်တည်ထောင်ခဲ့သော CMO စစ်တမ်းကိုအင်တာနက်စစ်တမ်းမှတစ်ဆင့်တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်သည်။ မေးခွန်းများအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထပ်ခါတလဲလဲ
← Prev 1 ... 118 119 120 ... 124 နောက်တစ်ခု→
119 ၏စာမျက်နှာ 124